Fampitahana iPad Mini 3 vs iPad Mini 2 Inona no mampiavaka azy ireo? | Vaovao IPhone
Alejandro Alemanina | | iPad
Efa fantatry ny rehetra ny toetran'ny fitaovana Apple vaovao, ary izay entin'izy ireo ao anaty tsinay. Tonga izao ny fotoana ampitahao amin'ny taloha ity taranaka vaovao ityr, ary tariho raha tena misy fiovana lehibe hampiatoana ireo fitaovantsika ankehitriny.
Manomboka amin'ny fampitahako ny iPad Mini 3 amin'ny endriny teo aloha aho, ny iPad Mini 2. Raha mijery ny latabatra amin'ny famaritana ireo fitaovana roa ireo ianao dia hieritreritra fa maneso anao aho, satria tsy misy fahasamihafana mankasitraka eo anelanelan'ny iray hafa. Izay no antony itondrako io fampitahana / fandinihana io.
efijery 7.9 " 7.9 "
vahaolana 2048 × 1536 teboka, 326 dpi 2048 × 1536 teboka, 326 dpi
processeur A7 A7
Rafitra fandidiana iOS 8.1 iOS 8.1
fakan-tsary iSight (5mpx) / Facetime (1.2mpx) iSight (5mpx) / Facetime (1.2mpx)
lafiny 200x134x7.5mm 200x134x7.5mm
Memoria 1 GB RAM RAM 1 GB?
fitehirizana 331 h 331 h
vidiny 16GB / € 289 32GB / € 339 16GB/389€ 64GB/489€ 128GB/589€
Amin'ireto angon-drakitra ireto dia ahitanao fa ny iPad Mini 2-nay dia tsy tokony hialona ny iray amin'ireo "taranaka vaovao" afa-tsy io mikasika kely izay nataonay io. Ny fahasamihafana tokana misy eo amin'ny iray sy ny iray hafa dia ny iPad Mini 3 manana built-in ny mpamaky sidina TouchID, izay manompo ankoatry ny zavatra hafa mba hamohana ny fitaovana, mividy ao amin'ny App Store na miditra amin'ny rindranasa (mitoetra ny fanontaniana raha hametraka RAM 1 na 2 GB izy, fa 1 GB kosa ny zava-drehetra).
Raha raisina an-tsaina izany dia manontany tena aho raha tsy nanota i Apple tamin'ny fandefasana ity fitaovana ity, mitovy amin'ilay teo aloha izay manana fahasamihafana tokana, noho ny fampiasana an'io, Tsy ho fandrosoana miavaka ihany koa io., ary miaraka amina paikadin'ny varotra izay ametrahany azy amin'ny vidiny 100 euro ambonimbony kokoa noho ny iPad Mini 2.
Tsy mankasitraka ny famoahana vokatra isan-taona aho, raha tsy misy fandrosoana lehibe. Izany hoe, raha tsy mampiditra teknolojia vaovao, na ny mety hitrangan'ilay fitaovana dia manana fahasamihafana tsikaritra miaraka amin'ilay kinova teo aloha. Saingy androany dia vitsy ny orinasa fantatro, raha tsy misy izay tsy manana izany fanao izany.
Ho famaranana, ny marina dia mety a fampielezana marketing tsara ho an'ny iPad Mini 2, raha mbola mijanona eny an-tsena. Satria ny fandefasana azy dia mihevitra ny fihenan'ny vidiny, fa ny varotra iPad Mini 3 kosa dia tsy mieritreritra hoe avo noho ny an'ny rahalahiny izy ireo.
Yo Tsy hividy an'ity fitaovana vaovao ity aho manana ilay teo aloha, ary raha te hividy iray aho dia hividy ny iPad Mini 2, afaka miaina tsy misy TouchID ianao, betsaka kokoa raha amin'ny lafiny mety dia mitovy sy mora kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fampitahana iPad Mini 3 vs iPad Mini 2, inona no mampiavaka azy ireo?
Apple maneso ny mpampiasa azy. Aiza ireo funboys izao mba hiarovana ny ipad mini 3 izao? Rehefa tsy misy hevitra dia satria aleony mangina,
Manana ny mini 2 aho ary mieritreritra marina fa ny mini 3 dia hanana ny anjarany mitovy amin'ny iPhone 5c ...
Te hahafantatra aho raha mendrika ny fiovana amin'ny iPad vaovao iPad ny fiovana amin'ny iPad iPad voalohany, raha ny hafainganam-pandeha sy ny touchid